China Electronic Hand Free Ultrasonic အရွယ်ရောက်ပြီးသူအလိုအလျောက်သွားတိုက်တံနှင့် Brush Heads EB510 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Charmhome
အီလက်ထရောနစ်လက်အခမဲ့ Ultrasonic အရွယ်ရောက်ပြီးသူအလိုအလျောက်သွားတိုက်တံနှင့် Brush Heads EB510
Acoustic တုန်ခါမှုသန့်ရှင်းသောနည်းပညာ - Sonic သွားတိုက်တံသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၃၁၀၀၀ မှ ၃၇၅၀၀ ထိထိ / တစ်ကြိမ်ရိုက်ပါကသာမန်သွားတိုက်တံထက် ၁၅၀% ပိုသောပြားများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Sonic သွားတိုက်တံသည်သွားဖုံးကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ပါဝါအရင်းအမြစ် 2W၊ USB အားသွင်းခြင်း
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား DC 3.7V, 1200mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား Φ29 * 244mm
အသားတင်အလေးချိန် 115 ဂရမ်
၃.၅ function mode များ (သန့်ရှင်း၊ အဖြူ၊ ပိုလန်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ အထိခိုက်မခံခြင်း) +3 သွားများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် Intensites များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
5.Vibration 31000-37500 လေဖြတ် / မိနစ်
၁၀-၁၂ နာရီအားသွင်းပြီးနောက် ၆.၅၀ ရက်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်။
၇။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသောထူးခြားသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဒီဇိုင်း၊ မော်တာနှင့်ကိုက်ညီပြီးအားအင်ကိုချွေတာပါ။
၁။ acustic တုန်ခါမှုသန့်ရှင်းသောနည်းပညာ - Sonic သွားတိုက်တံသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၃၁၀၀၀-၃၇၅၀၀ ထိ / တစ်သိန်းပတ်လည်တွင်သွားလက်တံသာမန်သွားတိုက်တံထက် ၁၅၀% ပိုသောပြားများကိုဖယ်ရှားပေးရန်ကူညီနိုင်ပြီး Sonic သွားတိုက်တံကလည်းသွားဖုံးကျဆင်းမှုမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
2. လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပါဝါကိုထိန်းချုပ်ရန်သော့ခလုတ်တစ်ခုသည်သွားတိုက်တံကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သင့်သွား၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ Modes ၅ ခုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Soft, Comfortable နှင့် Strenth နှင့်ကိုက်ညီရန် Intensites ၃ ခုရှိသည်။
ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းရန်လွယ်ကူခြင်း - ကြိုးမဲ့အဆင့်မြင့်သောအားသွင်းနည်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ခေတ်မီ။ အဆင်ပြေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သွားတိုက်တံကိုတစ်မိနစ်နှင့် ၂ မိနစ်အတွင်းတွင် ၁၀ နာရီအားသွင်းပြီးပါကဘက်ထရီသက်တမ်းသည်ရက်ပေါင်း ၅၀ တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
4. ရေစိုခံနိုင်မှု - IPX7 ရေစိုခံသည်သင်နှင့်သွားဖြီးအတွက်အလွန်လုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ သင်ရေချိုးသည့်အခါသို့မဟုတ်ရေထဲ၌သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်သင်သွားတိုက်တံကိုသုံးလျှင်ပင်မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။
ရှေ့သို့ Square Travel သွားတိုက်တံဖြစ်ရပ်မှန် CHS001
နောက်တစ်ခု: Soft Bristle ED710 ရှိသောကလေးများအတွက်ချစ်စရာကောင်းသည့် Ultrasonic လျှပ်စစ်ကလေးကလေးသွားတိုက်တံ
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ် Sonic T ...